Home Wararka Maanta “Waa sharci darro warqada Maxkamadda Gobolka ee lacagta Imaaraadka,” waxaa sidaas yiri…
“Waa sharci darro warqada Maxkamadda Gobolka ee lacagta Imaaraadka,” waxaa sidaas yiri…
Ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha Qaranka Soomaaliya, Garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa sharci darro ku tilmaamay waraaqdii ay Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhawaan ku hakisay bixinta lacagta Imaaraadka.
Warqada kasoo baxday maxkamadda gobolka Banaadir 30-kii bishii hore, islamarkaana lagu soo aadiyey safarka Rooble uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu faray guddoomiyaha bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda in lacagtaas aan laga bixin karin qasnadda dowlada.
Garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa sheegay in ugu horeyntii ay aheyd qalad in la qabto lacagta u socotay safaarada Imaaraadka ee Soomaaliya, kaasi oo jabinaya xeer caalami ah.
“Marnaba qaanuunka marnaba ma cadeynayo in Safaarad hanti ay leedahay ama boorsooyin ay leedahay la baaro oo la xanibo. Wadan kasta oo caalamka ka jira qanuunkaas ayey ku dhaqmaan, weyba dhacday hadda waxaa go’aan ka gaaray Golaha wasiirada oo in dib loogu cesho lacagta dowladda Imaaraadka Carabta,” ayuu yiri.
“Waxaa la is-weydiinaya halkee xeer ilaalinta kasoo gashay arrintaan? Ma Madaxweynaha ayaa u dacwooday, ma aheyn inay gesho xeer ilaalinta oo dacwad maamul haddii ay jirto waxay aheyd in maxkamada sare loo dacwoodo.”
Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay in Ra’iisul Wasaaraha iyo Golahiisa wasiirada ay raali-gelin ka bixiyaan qaladka lagula kacay dowladda Imaaraadka Carabta, islamarkaana uu ku dhiiraday in uu ballan-qaado in uu lacagtii dib ugu celiyo.
“Dacwado badan ayaa la gudbiyay ardaydii la qaaday Eretria oo aan illaa hadda la ogeyn halka ay ku dambeeyen, runtii waxaa leeyahay in arrintaas ay xal u iman doonaan iyo in meesha laga saari doono hay’addaha la isku adeegsanayo.”
Hadalkan ayaa imanaya kadib markii Maxakamadda gobolka ay shaaca ka qaaday in lacagtaas oo dhan 9,600,000 inay si sharci darro ah kusoo gashay dalka, isla-markaana ay weli hortaallo xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka.
Amarka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa kusoo aaday, xilli xasaasi ah, islamarkaana ra’iisul wasaare Rooble uu aadayay dalka Isu Tagga Imaaraadka Carabta, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay, isaga oo maalmihii dambe la kulmay madaxda dalkaas.